Home Wararka Rooble oo mudo 2 asbuuc gudahooda isku dayay inuu qaadka Kenya dib...
Rooble oo mudo 2 asbuuc gudahooda isku dayay inuu qaadka Kenya dib furto, fashilna kala kulmay
Waxaa mudo labo asbuuc gudahooda uu RW Rooble u diray dalka Kenya qaar kamida wasiiradiisa, gaar ahaan kuwa isaga ku dhaw. Asbuuc ka hor ayaa ay ahayd markii uu Rooble Wasiir Cadaala oo ay ehel soke yihiin uu si dhuumasho ah ku tagay dalka Keyna si Loo furo qaadka.
Rooble ayaa ku xiray madaxda Kenya in lagu siiyo isaga iyo saaxiibadiisa aduun lagu sheegay $2 Malayan oo lacagta Maraykanka ah.
Lacagtaan ayaa ahayd mid lagu sheegay in lagu fududeynayo in xayiraad ka qaadida qaadka Kenya oo mudo dhowr sano ah xayirnaa.
Ma aha markii u horeeysay ee uu Rooble isku dayo in uu dib u furto qaadka Kenya, balse waxa uu halkaas horay ugu diray qaar kamida ganacsatada beesha Sacad ee uu isaga ka jeedo.
Sida Ilo lagu kalsoon yahau u sheegeen MOL, ugu danbeeyntii waxa uu asbuucaan u diray dalka Kenya qaar kamida Wasiiradiisa si ay markale Kenya ugu soo qanciyaan in la siiyo dhaqaale lagu furdaamiyo qaadka.
Waxaa muuqata deg degsiimo ku jirto Rooble taas oo ah in uu wax gacan qabsi ah ka qaato Kenya inta waqtigiisa soo dhamaan asbuucaan.
Previous article(DEG DEG)Farmaajo oo soo saaray amar madaxweyne oo uu uga horyimid tallaabooyin uu qaaday Rooble
Next articleMidowga Afrika oo ka hadlay weerarkii lagu qaaday Saldhiga ATMIS ee Ceel Baraf
Taliska CXDS oo howlgalo qorsheysan ka fuliyay G/Hiiraan
(XOG) Madaxda Sirdoonada Somalia & Talyaaniga oo hada shir uga socdo...